एचफाइभ, खुराक, साइड इफेक्ट र चेतावनीहरू - शा Che्केकेमिकलमा एन्फुभर्टिडेड प्रयोग
१. एनफुभर्टिडे भनेको के हो?
२. कार्यको enfuvirtide संयन्त्र?
H. HV मा Enfuvirtide प्रयोग
En. कसरी एनफुभर्टाइड पाउडर प्रयोग गर्ने?
En. Enfuvirtide खुराक?
F. enfuvirtide का साइड इफेक्ट के के छन्?
En. एन्फुभर्टाइड पाउडर कसरी भण्डारण गर्नुपर्दछ?
En. Enfuvirtide पाउडर मा अधिक अनुसन्धान र अनुप्रयोग
1. Enfuvirtide के हो?
Enfuvirtide (१ 159519 65 0१20 -XNUMX-XNUMX-०) पेप्टाइडको एक प्रकार हो जुन मानव इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस (एचआईभी) लाई तपाईको स्वस्थ कोशिकाहरू संक्रमण हुनबाट रोक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ जुन तपाईको शरीरमा रोग प्रभाव बढाउन सक्छ। Enfuvirtide वा T-XNUMX दुनिया को विभिन्न भागहरु मा बेचिन्छ फुजियोन नाम को नाम। जहाँसम्म, तपाईं कहाँबाट आउनु भयो, निर्भर गर्दै, तपाईंले भिन्न ब्रान्डको नाममा ईन्फुभर्टिडेट बेच्न पाउनुहुनेछ, तर ती सबै एउटै उद्देश्य प्रयोग गर्दछन्।
Enfuvirtide पाउडर (159519-65-0) एचआईभीको उपचार गर्नको लागि अन्य औषधीहरूको साथ प्रयोग गरिन्छ, जुन एक इन्टुमेन्ट इम्युनोडेफिशियन्सी सिन्ड्रोम (एड्स) को लागि जिम्मेवार भाइरस हो। तपाईंले यो पनि याद गर्नुपर्दछ कि Enfuvirtide ले HIV लाई निको पार्दैन, तर यसले शरीरमा यसको प्रभाव र प्रभावहरू लाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। यस उत्पादन लिने व्यक्तिहरूले राम्रो र स्वस्थ जीवन बिताउँछन् किनकि उनीहरूको सेलहरू भाइरसबाट सुरक्षित छन्। अध्ययनका अनुसार एचआईभी भाइरस हो तपाईको शरीरमा सेतो कोषहरू संक्रमित गर्छ जुन रोगसँग लड्नका लागि जिम्मेवार छ। त्यसकारण, धेरै जसो केसहरूमा, एचआईभी / एड्स बिरामीहरूले कम प्रतिरक्षा स्तरको अनुभव गर्छन्। यद्यपि, एनफुभर्टाइडले तपाईंको स्वस्थ कोषहरूलाई कुनै पनि क्षतिबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ, जसले तपाईंको स्वास्थ्य अवस्था बढाउँदछ।
एन्फुभर्टाइड एसीटेटले तपाईको शरीरमा एचआईभीको मात्रालाई न्यूनतम गर्दछ, जसले तपाईको प्रतिरक्षा प्रणाली बढाउन मद्दत गर्दछ। उत्पादनले तपाईंलाई एचआईभी जटिलताहरू हुने सम्भावनाहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ जस्तै संक्रमणहरू जुन अधिकतर एचआईभी बिरामीहरूलाई आक्रमण गर्दछ। जब तपाईले अन्य एचआईभी / एड्स औषधी लिनुहुन्छ, Enfuvirtide सँगसँगै जानको लागि यो सधैं राम्रो विचार हो किनभने यसले औषधिलाई अझ राम्रोसँग काम गर्न र उनीहरूको दक्षता सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
Enfuvirtide बिभिन्न प्लेटफार्महरु मा उपलब्ध छ तर डाक्टरको पर्चीमा बेच्नु पर्छ। तसर्थ, यो उत्पादन लिनु अघि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं एक चिकित्सा जाँचको लागि जानुहुन्छ, र तपाईं आफ्नो डाक्टरबाट सहि खुराक लिनुहुन्छ। Enfuvirtide एसीटेट अनलाइन उपलब्ध छ, र तपाईं आफ्नो घर वा कार्यालय को आरामबाट आफ्नो अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, तपाईंको अर्डर गर्नु अघि निर्माता र आपूर्तिकर्तालाई बुझ्नको लागि उचित अनुसन्धान गर्नुहोस्। Enfuvirtide मूल्य विक्रेताको आधारमा फरक हुन सक्छ। बजारमा त्यहाँ धेरै नक्कली मेडिकल पदार्थहरू छन् जसले तपाईंको अवस्थालाई बिगार्न सक्छ। यदि तपाईं कहाँ औषधि लिने बारे निश्चित हुनुहुन्न भने, थप सहयोगका लागि आफ्नो डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
2. कार्यको enfuvirtide संयन्त्र?
पहिले उल्लेख गरिएको जस्तो, Enfuvirtide इंजेक्शन मानव इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस (एचआईभी) को उपचारमा प्रयोग गरिएको औषधी हो। भाइरस आफैले बढेर वा नक्कल गर्दैन, र यसैले यसले शरीरको कोशिकालाई तिनीहरूको मेटाबोलिजम प्रयोग गर्न आक्रमण गर्दछ। एचआईभीले प्रायः तपाईको प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकालाई आक्रमण गर्दछ जुन CD4 T-helper लिम्फोसाइट्स वा सेतो रक्त कोषहरू भनेर चिनिन्छ। कक्षहरू कुनै पनि संक्रमणसँग लडेर काम गर्दछ, तपाईंको शरीर प्रणालीमा प्रवेश गर्ने कोशिश गरेर। प्रतिकृति प्रक्रियामा, एचआईभीले CD4 टी-सहायक कोषहरू मार्दछ, र नतिजाको रूपमा, तपाइँको शरीर कमजोर हुन्छ, कुनै पनि पछि आउने रोगहरूसँग लड्न असमर्थ पार्दै। यसको मतलब तपाई बहुसंख्यक बिरामीहरुबाट संक्रमित हुनुहुनेछ जुन तपाईको शरीरले उनीहरूसँग लड्न सक्दैनन्।
कार्यको Enfuvirtide मेकानिजमले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँको CD4 कक्षहरू HIV आक्रमणबाट सुरक्षित छन्। उत्पादन भाइरसको वरिपरि प्रोटीनमा बाँधिन्छ, जसले यसलाई सीडी cells कोषहरूमा आफै संलग्न गर्न मद्दत गर्दछ। एक पटक इनफुभर्टाइड यी प्रोटीनको साथ संलग्न भएपछि, यसले एचआईभीलाई तपाईंको CD4 सेल झिल्लीको साथ फ्यूज गर्नबाट रोक्दछ। नोट गर्नुहोस्, एचआईभी ले मात्र प्रतिलिपि बनाउन र बढाउन सक्दछ जब यसको आनुवंशिक सामग्री तपाईंको सीडी cells कोषहरूमा जान्छ। यसैले, enfuvirtide ले यो पनि सुनिश्चित गर्दछ कि भाइरस पुन: उत्पादन गर्दैन र संख्यामा बढ्दैन।
यो कार्यको Enfuvirtide संयन्त्र बजारमा रहेका सबै एचआईभी एन्टी-एचआईभी औषधीहरू भन्दा फरक हुन्छन, जसले तपाईंको सीडी cells कोषहरूलाई संक्रमित गरेपछि मात्र भाइरससँग लड्छ। यसैले, एनफुभर्टाइड एचआईभी एक सब भन्दा शक्तिशाली एन्टि-एचआईभी औषधी हो र यो भाइरसको बृद्धि गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ जब यो अन्य औषधीहरूको प्रतिरोधात्मक हुनेछ। जहाँसम्म, तपाईं अझै पनि Enfuvirtide लिन सक्नुहुन्छ वा यो तपाईंको पहिलो रोजाई बनाउन सक्नुहुन्छ, र यसले इच्छित परिणामहरू डेलिभर गर्दछ। आज सम्म, त्यहाँ कुनै ज्ञात एचआईभी उपचार छैन, तर एनफुभर्टाइडको साथ तपाई आफ्नो शरीरमा भाइरसको मात्रा कम गर्ने र एचआईभी / एड्सको संक्रमणको कारण हुने कुनै पनि बिरामीको प्रगतिलाई धीमा पार्न सक्नुहुन्छ।
विज्ञहरूले सल्लाह दिन्छन् कि तपाईले एन्फुभर्टिडे पाउडर सँगै अन्य एन्टि-एचआइभी औषधीहरू सँग जो भाइरसलाई विभिन्न तरिकामा आक्रमण गर्दछन्। थप्दै पेप्टाइड पाउडर अवस्थित उपचार एक महान विचार हुन सक्छ, विशेष गरी यदि संक्रमण औषधी प्रतिरोधी छ। यस उत्पादनलाई सबैभन्दा शक्तिशाली एन्टी-एचआईभी औषधी मध्येको रूपमा पनि भनिन्छ, र यो प्रायः बिरामीहरूलाई सिफारिस गरिएको छ जसले कुनै पनि सुधार अनुभव नगरीकन अन्य औषधीहरू लिइरहेका छन्। यो मानिसहरूलाई HIV एन्टी-एचआईभी सिफारिशहरुमा असहिष्णुता पनि हुन सक्छ।
3. HV मा Enfuvirtide प्रयोग
फ्यूजनले एनफुभर्टाइड पाउडरलाई सक्रिय पदार्थको रूपमा समावेश गर्दछ, जुन यसले तपाईंको शरीरमा एचआईभी विरुद्ध लड्नको लागि एक आदर्श नुस्खा बनाउँछ। फ्यूजन एक फ्यूजन इनहिबिटर भनेर चिनिने औषधीहरूको वर्गसँग सम्बन्धित छ। यस समूहमा औषधीय यौगिकहरू जस्तै फ्युजन, एचआईभी भाइरसलाई सीडी cells कोषहरूसँग फ्यूज गर्नबाट रोक्छ र अन्ततः उनीहरूको नक्कल गर्न र संख्यामा बढ्नबाट रोक्छ। पेप्टाइड पाउडर राम्रो परिणामको लागि अन्य एन्टि-एचआईभी औषधिहरूको साथ प्रयोग गर्दछ। माथि उल्लेख गरिए अनुसार, enfuvirtide प्रोटीनको साथ बाँधेर काम गर्दछ जसले एचआईभीको लागि CD4 को साथ फ्यूज गर्न सजिलो बनाउँदछ।
यो कार्यले भाइरसलाई सेतो रक्त कोशिकामा छिर्न असम्भव बनाउँदछ र तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई असर गर्दछ। धेरै जसो मामिलामा, एनफुभर्टिडे एसीटेट व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गरिन्छ जसले अन्य औषधीहरू लिइरहेका छन्, र भाइरस विकसित भएको अन्य औषधिहरू प्रति प्रतिरोधीको रूपमा देखा परेको छ। यस उत्पादनलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा लिने बारे थप जानकारीको लागि तपाईंको डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्।
4. कसरी enfuvirtide पाउडर प्रयोग गर्ने?
तपाईंले यो औषधि लिन सुरु गर्नु अघि, यो कुरा निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले प्याक भित्र पर्चामा enfuvirtide निर्माताको उपयोग निर्देशनहरू पढ्नुभयो। दिशानिर्देशहरूले तपाईंलाई कसरी उत्पादन व्यवस्थापन गर्ने बारेमा बढी जानकारी दिनेछ। केहि Enfuvirtide आपूर्तिकर्ता तपाइँलाई केही एनफुभर्टाइड साइड इफेक्ट पनि प्रदान गर्दछ ताकि तपाइँ तपाइँको डाक्टर कहाँ पुग्न कहिले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। पदार्थ पनि लिदा तपाईलाई सुरक्षित हुनको लागि उनीहरूले एनफुभर्टाइड चेतावनीहरू पनि प्रदान गर्छन्।
Enfuvirtide एक ईन्जेक्शन उत्पादन हो, अन्य एन्टि-एचआईभी औषधिहरू भन्दा बाहिर जो मौखिक रूपमा लिईन्छ। यो पेप्टाइड पाउडरसँग ठूलो अणुहरू हुन्छन् जुन तपाईंको शरीर प्रणालीमा कुचलिन सकिन्छ जब मौखिक रूपमा लिईन्छ र अपेक्षित परिणामहरू दिन असफल हुन्छ। पेप्टाइड पाउडरको लागि, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले तयारी सही पाउनुभयो वा तपाईंको डाक्टरले तपाईंको लागि यो गरौं। यद्यपि तपाईको डाक्टरले तपाईलाई ईन्फुभर्टाइड पाउडरलाई विलायकको साथ कसरी तयार गर्ने बारे प्रशिक्षण दिन सक्छ।
Enfuvirtide पाउडर तयार गर्दा सबै तयारी चरणको अनुसरण गर्नुहोस्। पाउडरलाई बाँझो पानीसँग मिसाउनुपर्दछ र समाधानलाई दृश्यात्मक रूपमा निरीक्षण गर्नुपर्दछ सुनिश्चित गर्नका लागि समाधान पूर्ण रूपमा मिसिन्छ सुनिश्चित गर्न इन्जेक्शन चलाउनु अघि।
इन्जेक्शन वाइलको लागि बाँझ पानीको खुराकबाट फ्लिप-अफ क्याप हटाएर सुरु गर्नुहोस्।
बिस्तारै बाँझो रक्सीको स्वाबको साथ प्रत्येक शीशोलाई पछाडि राख्नुहोस् त्यसपछि शीर्ष एयर-ड्राईमा केही समयको लागि यसलाई छोड्नुहोस्।
ML एमएल ठूलो सिरिन्ज प्रयोग गर्नुहोस् र प्लनगरलाई लगभग १ एमएल मार्कमा तान्नुहोस्, त्यसपछि वायुलाई बाँझो पानीको शीशमा बिस्तारै इन्जेक्ट गर्नुहोस्।
अब स्ट्यापर सेन्टरको माध्यमबाट डाईफरमा बाँझ सिरिंज सुई घुसाउनुहोस्।
एउटा कोणमा बाँझो पानीको साथ सिरिंज घुसाउनुहोस्।
त्यसपछि बाँझो पानी इन्जेक्ट गर्नुहोस्, र निश्चित गर्नुहोस् कि यो फुजियन पाउडरमा बिस्तारै ड्रिप हुन्छ।
शीशी नलुकाउनुहोस् तर यो औंलाउन लगभग १० सेकेन्डको लागि ट्याप गर्न तपाईंको औंलाको प्रयोग गर्नुहोस्।
जब यो विघटन गर्न थाल्छ, यसलाई पूर्ण रूपमा विघटन गर्न एकतिर राख्नुहोस् जुन which 45 मिनेट लिन सक्दछ।
जब पूर्ण रूपमा मिसिन्छ, समाधान रंगहीन, स्पष्ट हुनुपर्दछ, कुनै बुलबुले बिना नै, यदि समाधान जेल गरिएको छ भने, आफैलाई इन्जेक्सन गर्नु अघि यसलाई विघटन गर्न अझ बढी समय दिनुहोस्। एकचोटि समाधान समाधान भयो र यसको स्पष्ट भएपछि तपाईं अब खुराक व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं कुनै कण देख्नुहुन्छ वा समाधान पूर्ण स्पष्ट हुनु अघि खुराक नलगाउनुहोस्।
वयस्कहरूको लागि सामान्य खुराक प्रति दिन ml ० मिलि हो जुन दिनको दुई पटक लिनुपर्दछ। तपाईंको ईन्जेक्शन तपाईंको माथिल्लो पाखुरा वा तपाईंको फिलाको माथिल्लो भागमा प्रशासित हुनुपर्दछ। यदि तपाईं बच्चालाई उत्पादन दिइरहनुभएको छ भने, तपाईंको डाक्टरले सही खुराक र कति पटक इंजेक्शन प्रशासन गर्ने बताउँछ। यो निको पार्ने समय दिन इन्जेक्शन क्षेत्र घुमाउने सल्लाह दिइन्छ। साथै, तपाईंलाई एन्फुभर्टाइड लिन थाल्नु अघि कुनै अन्य रोगको औषधी लिईरहनुभएको छ भने आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्।
5. Enfuvirtide खुराक?
Enfuvirtide प्रतिरक्षा प्रणाली वृद्धि गर्न कुनै पनि एचआईभी / एड्स बिरामीले लिनुपर्दछ किनकि यसले भाइरसलाई सीडी cells कोषहरूसँग फ्यूज गर्नका साथै उनीहरूलाई नक्कल गर्नबाट रोक्दछ। खुराक, तथापि, बच्चाहरू र वयस्कहरूको लागि फरक हुन्छ। एनफुभर्टाइड संश्लेषणले एचआईभी भाइरससँग लड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ जुन अन्य एन्टि-एचआईभी औषधीहरूको प्रतिरोध क्षमता विकास गर्दछ।
HIV को लागी सिफारिश गरिएको enfuvirtide वयस्क खुराक प्रति दिन m ०mg हो जुन दुई खुराकमा विभाजित गर्नुपर्दछ। तपाईं इंजेक्शन प्रशासित गर्नु पर्छ यद्यपि पूर्वकालको फिला, माथिल्लो पाखुरा वा पेट।
बाल औषधि खुराक years देखि १ years वर्ष पुरानोको लागि, प्रति किलो २mg हो, र खुराक प्रति दिन दुई पटक प्रशासित गर्नुपर्नेछ। यस उमेर कोष्ठकमा बच्चाहरूको लागि अधिकतम खुराक प्रति दिन m ०mg हो। १ years बर्ष र माथिका बच्चाहरूको लागि सिफारिश गरिएको खुराक प्रति दिन mg ० मिग्रि हो र दैनिक दुई खुराकमा पनि विभाजन गर्नुपर्दछ।
Enfuvirtide खुराक हरायो?
यदि तपाइँले तपाइँको एन्फुभर्टिडे एचआईभी खुराक लिन बिर्सनुभयो भने, तुरून्तै लिनुहोस्, याद छ। यद्यपि तपाई डोज छोड्न सक्नुहुनेछ यदि अर्को डोजको लागि लगभग समय आयो भने। छुटेको भन्दा बढि डोज प्रयोग नगर्नुहोस्; यसले गम्भीर साइड इफेक्ट निम्त्याउन सक्छ। साथै, प्रिस्क्रिप्शन पूर्ण रूपमा समाप्त हुनुभन्दा अघि तपाईंको अर्को प्रिस्क्रिप्शन समयमै प्राप्त गर्न नबिर्सनुहोस्।
Enfuvirtide खुराक भन्दा बढि?
कुनै अधिक ओजोडिंगको मामलामा तुरून्त मेडिकल ध्यान खोज्नुहोस् किनकि यसले तपाईंलाई गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा पार्दछ।
जब एनफुभर्टिडे एसीटेट लिनुहुन्छ भने यसलाई तपाईको घुँडा, कुहिनो, नाभी वा नितम्बको छेउमा इन्जेक्सन नगर्नुहोस्। स्कार्, मोल्स, चोट वा स्वस्थ नहुने कुनै छाला सतहमा डाइजेक्ट इन्जेक्सनबाट बच्नुहोस्। एन्फुभर्टिडे लिनाले तपाईलाई रोग फैलाउनबाट रोक्दैन, त्यसकारण सँधै यौनसम्बन्ध राख्नुहोस्, तीखो वस्तुहरू र तपाईंको टूथब्रश साझेदारी नगर्नुहोस्। तपाईलाई सबै खुराक निर्देशनहरू अवलोकन गर्नुहोस् अधिकतम लाभ लिन। अधिक जानकारीको लागि, डाक्टरसँग कुरा गर्नुहोस् एचआईभी प्रसारण रोक्नको बिभिन्न तरिकाहरूमा मार्गदर्शन गर्न।
6. एन्फुभर्टिडेको साइड इफेक्ट के हो?
एनफुभर्टाइड एचआईभी जस्तो अन्य कुनै पनि औषधीले पनि तपाईको बिभिन्न साइड इफेक्टहरूमा पर्दाफास गर्न सक्छ कसरी औषधि तपाइँको शरीर प्रणालीको साथ प्रतिक्रिया गर्छ। कहिलेकाँही enfuvirtide साइड इफेक्ट अधिक मात्रा वा दुरुपयोगका कारण हुन्। यद्यपि त्यहाँ केहि साइड इफेक्टहरू छन् जुन प्राय: सबै enfuvirtide प्रयोगकर्ताहरूमा समान छन्। कम एनफुभर्टाइड भण्डारणले गम्भीर साइड इफेक्ट पनि निम्त्याउन सक्छ। केही सामान्य Enfuvirtide साइड इफेक्ट समावेश;
भूक, मतली, पखाला र कब्जको धेरै
पीडा, सूजन वा इन्जेक्शन क्षेत्रमा जलन
मांसपेशी कमजोरी र दुखाइ
तपाईको डाक्टरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् तुरुन्त तपाईलाई तलका गम्भीर दुष्प्रभावहरूको अनुभव गर्नुहोस्;
तपाईंको घाँटी वा घाँटी वरिपरि सूजन, नपुंसकता वा मासिक परिवर्तनहरू
नयाँ संक्रमण को लागी लक्षणहरु जस्तै सुजिएको ग्रन्थी, घरघराहट वा चिसो घाउहरू।
तपाईंको पेशाबमा रगत
एनफुभर्टाइड साइड इफेक्टहरू एक व्यक्तिबाट अर्कोमा फरक हुन सक्छ र त्यसैले उनीहरूलाई कुनै पनि लिनु हुँदैन। यदि तपाइँको डाक्टरलाई जानकारी दिनुहोस् यदि सामान्य साइड इफेक्ट केहि समय पछि हराउँदैन। यस उत्पादन लिदा सुरक्षित रहनका लागि, तपाइँको डाक्टर द्वारा उपलब्ध गराईएको सबै खुराक निर्देशनहरू अवलोकन गर्नुहोस्।
7. कसरी enfuvirtide पाउडर भण्डारण गर्नुपर्छ?
Enfuvirtide पाउडर (159519-65-0) निर्माताहरूले सँधै स indicate्केत गर्दछन् कि तपाईंले कसरी उत्पादन भण्डार गर्नुपर्दछ यसलाई प्रयोग गर्ने बेलामा र यसलाई कसरी डिसस्पोज गर्ने भन्ने पनि। सिफारिश नगरिएको एनफुइभर्डिडेज भण्डारण पाउडर कोठाको तापमानमा २० देखि २ 20 डिग्री सेल्सियस हुन्छ। जे होस्, यदि तपाईं कोठाको तापक्रममा भण्डार गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, तपाईं यसलाई लगभग २ देखि degrees डिग्री सेल्सियसमा फ्रिजमा राख्न सक्नुहुन्छ। साथै, बाँझो पानी भण्डार गर्नुहोस् कोठाको तापमानमा सबै समयमा।
जब तपाईले एनफुभर्टाइड समाधान मिक्स गर्नु भएको छ यसलाई फ्रिजमा २ देखि degrees डिग्री सेल्सियस मा भण्डार गर्नुहोस्। मिश्रित एनफुभर्टाइड समाधान २2घण्टा भित्र लिनुपर्छ। यो म्याद समाप्त भएपछि पदार्थलाई प्रयोग नगर्नुहोस् र किटको छाप भाँच्दा वा हराइरहेको बेला पनि यो खरीद नगर्नुहोस्। एनफुभर्टाइड पाउडर प्रयोग गरिसकेपछि, तपाईं कसरी किट र प्रयोगमा नभएको औषधि डिसपोज गर्ने बारेमा एफडीए दिशानिर्देशहरू पालना गर्नुहोस्।
8. Enfuvirtide पाउडर मा अधिक अनुसन्धान र अनुप्रयोग
जब बिभिन्न आपूर्तिकर्ताहरुबाट एनफुभर्टिडे पाउडर खरिद गर्छन्, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले राम्रो अनुसन्धान गर्नुभयो सुनिश्चित गर्नका लागि कि तपाईले एक गुणस्त उत्पादन पाउनुभयो जुन तपाईलाई प्रभावकारी नतिजाको ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछ। यद्यपि enfuvirtide ब्रान्ड नाम Fuzeon बजार मा सामान्य ब्राण्ड हो, तपाईं पनि एक फरक ब्रान्ड नाम अन्तर्गत बेच्ने उत्पादन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बजार मा धेरै enfuvirtide आपूर्तिकर्ताहरु छन्, र तपाइँ सधैं उत्तम को लागी जानु पर्छ। को Enfuvirtide मूल्यहरु एक विक्रेताबाट अर्को विक्रेतामा भिन्न हुन सक्दछ, सही विक्रेता छनौट गर्दा यसलाई महत्त्वपूर्ण कारकको रूपमा प्रयोग नगर्नुहोस्।
सबैमा, त्यहाँ अन्य चिकित्सा अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यक छ अन्य enfuvirtide प्रयोग र यसको अनुप्रयोग निर्धारण गर्न। नियमित इन्जेक्शन उत्पादनको रूपमा, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्, र थप अध्ययनहरूले एनफुभर्टिडेड मौखिक खुराक विकास गर्न मद्दत गर्दछ। वैकल्पिक रूपमा, पदार्थ अर्को महिनामा एक वा दुई पटक इन्जेक्सन गर्न विकसित गर्न सकिन्छ। अहिलेको लागि, enfuvirtide एक इंजेक्शन योग्य र शक्तिशाली एचआईवी औषधी रहन्छ। Enfuvirtide र gp41 को बारे मा तपाइँको डाक्टर संग कुरा गर्न स्वतन्त्र महसूस।
झू, एक्स।, झू, वाई, ये, एस, वाang, क्यू, जु, डब्ल्यू। सु, एस,… र झाhang, टी। (२०१ 2015)। Enfuvirtide over HV फ्यूजन इनहिबिटर AP3 को औषधी र संरचनात्मक गुणहरु: कृत्रिम पेप्टाइड रणनीति को फाइदा हाइलाइट। वैज्ञानिक रिपोर्टहरू, 5, 13028।
ब्लान्को, JL, र मार्टिनेज-पिकाडो, J. (२०१२) एआरटी-अनुभवी बिरामीहरूमा एचआईभी एकीकृत अवरोधकर्ताहरू। एचआईभी र एड्स मा वर्तमान विचार, 7(5), 415-421।
चौधरी, एस, र रोय, पीके (२०१ 2016)। एचफाइभको संयोजन संयोजनको रूपमा एन्फुभर्टिडे र प्रोटीज अवरोधकहरूको गणितीय मोडलि model। Nonlinear विज्ञान र संख्यात्मक सिमुलेसन को अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल, 17(6), 259-275।